Jawaabaha FEMA: Habka Racfaanka Q&A | Nashville VOAD
Xogta laga helo FEMA.com
Maaha wax aan caadi ahayn in badbaadayaashu ay rafcaan ka qaataan go’aamada FEMA ee ku saabsan gargaarka musiibo ka dib. Kuwa aan ku raacsanayn natiijooyinka FEMA, waxaa jira nidaam racfaan. Waa kuwan qaar ka mid ah su’aalaha soo noqnoqda ee habkaas ku saabsan.
Rafcaan ka qaadashada Go’aanka FEMA
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu racfaan ka qaato go’aanka FEMA. Rafcaanka waa in lagu xereeyaa qaab warqad saxiix ah, codsaduhu, 60 maalmood gudahooda laga bilaabo taariikhda warqadda go’aanka. Racfaanka dhexdiisa, sharax sababta aad u khilaafsan tahay go’aanka. Ku dar xog kasta oo la codsado iyo dukumeenti taageero ah.
Hubi inaad ku darto kuwan soo socda:
Codsadaha magaciisa oo buuxa, cinwaanka hadda iyo lambarka taleefanka
Ciwaanka codsadaha degaankiisa koowaad musiibada ka hor
Saxeexa codsadaha iyo taariikhda
Lambarka diiwaangelinta codsadaha (bog kasta)
FEMA nambarka cadeynta masiibada: DR – 4601
Haddii qofka qoraya warqadda rafcaanka uusan ahayn codsadaha ama xubin ka tirsan qoyska codsadaha, bayaan waa in lagu daraa ogolaanshaha qoraaga inuu ku matalo magacaaga.
Waraaqaha rafcaanka iyo dukumeentiga taageerada si dhakhso ah ayaa loogu shubi karaa akoonkaaga DisasterAssistance.gov ama fakis ahaan loogu diri karaa 800-827-8112. Fadlan hubi in dhammaan fakisyada ay ku jiraan xaashida daboolka ee lagu siiyay warqaddaada go’aanka FEMA.
Habka Racfaanka Q&A
Maxay ka dhigan tahay marka FEMA ay tiraahdo rafcaan baan karaa?
Marka FEMA ay tiraahdo rafcaan ayaad ka qaadan kartaa, waxay la macno tahay haddii aad dareento in cadadka kaalmada ee la helay aysan ku filneyn inay kaa caawiso soo kabashada, waxaad racfaan ka qaadan kartaa go’aankaas. Badbaadayaashu waa inay ku soo gudbiyaan warqad racfaan 60 maalmood gudahooda laga bilaabo taariikhda warqadda.
Sideen racfaan uga qaadan karaa?
Marka hore, si taxadar leh u akhri warqadaada go’aanka. Waxaa laga yaabaa in lagugu helo inaadan u qalmin dukumentiyada maqan awgeed. Haddii, ka dib markaad u hoggaansanto dhammaan codsiyada FEMA aad weli ku raacsanayn natiijooyinka, waxaad qaadan kartaa racfaan. Si aad racfaan u qaadato, waxaad u baahan tahay inaad qorto warqad sharaxaysa sababta racfaankaaga. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad saxiixday warqadda oo aad ku dartid magacaaga oo buuxa, lambarkaaga diiwaangelinta FEMA iyo lambarka musiibada, oo hubi inaad keento dukumeenti kayd ah rafcaanka.
Maxaan u baahanahay inaan racfaan ka qaato?
Warqadda rafcaanka oo ay la socoto, waxaad u baahan tahay inaad keento dukumeenti taageero ah oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin qiyaasaha qandaraaslaha, rasiidhada kasta ama diidmada caymiska ama warqad dejinta.
Waa maxay siyaabaha aan ku soo gudbin karo racfaankayga?
Waxaa jira saddex siyaabood oo kala duwan oo aad ku soo gudbin karto racfaankaaga. Waxaad fakis ugu diri kartaa 800-827-8112. Waxa kale oo aad u diri kartaa FEMA Xarunta Adeegga Hagaajinta Qaranka, PO Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055, ama waxaad aadi kartaa koontada musiibadaassistance.gov oo soo gudbi dukumentiyadaada.
Maxay yihiin 4-ta shay ee ugu sarreeya ee badbaadayaashu rafcaan ka qaataan?
Waxyaabaha ugu badan ee FEMA ay aragto dadka rafcaan ka qaadanaya waa dayactirka guriga, kaalmada kirada, hantida gaarka ah, iyo lahaanshaha/deganaanshaha.
Maxaa dhacaya haddii aan haysto wax ka badan hal racfaan?
FEMA waxay bixisaa noocyo badan oo gargaar ah taasoo keeni karta in ka badan hal rafcaan.
Yaa iga caawin kara habka racfaanka?
Qof kasta ayaa kaa caawin kara inaad qorto racfaan. Waxaad wici kartaa khadka caawinta FEMA 800-621-3362 ama Adeegyada Sharciga Musiibada ayaa sidoo kale ku caawin kara. Wac 800-310-7029.
Maxaa dhacaya haddii aan dhaafo 60-ka maalmood ee daaqadda si aan racfaan uga qaato?
Xitaa haddii aad seegto daaqadda 60-ka maalmood waxaad weli qaadan kartaa racfaan; si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa inaad sharaxdo sababta warqadda rafcaanku u soo daahday.
Sidee bay caadi u tahay in rafcaan laga qaato?
Ma ahan wax aan caadi ahayn in kuwa badbaaday ay racfaan ka qaataan. Waa fursad ay badbaadayaashu ku daraan dukumeenti dheeraad ah si ay u taageeraan codsigooda.
Intee in le’eg ayay qaadanaysaa in racfaanku socdo?
Waxay qaadan kartaa ilaa 90 maalmood in FEMA ay go’aan ku gaarto, waana sababta ay muhiim u tahay in lagu daro dhammaan dukumeentiyada loo baahan yahay racfaankaaga hore.
Sideen ku ogaan karaa in racfaankaygii la ansixiyay ama la diiday?
FEMA waxay kuugu soo diri doontaa warqadaada go’aanka boostada ama iimaylka midkood. Waxaad sidoo kale aadi kartaa akoonkaaga internetka ee disasterassistance.gov si aad u hubiso heerka codsigaga.
Miyaan racfaan ka qaadan karaa mar labaad haddii aan hayo macluumaad dheeraad ah?
Waxaad rafcaan ka qaadan kartaa go’aanka racfaankaaga haddii aad hayso macluumaad cusub ama dheeraad ah oo aan lagu soo gudbin codsigii hore.
NASHVILLE, Tenn. (Maajo 14, 2021) – Musiibo ka dib, fannaaniinta khiyaanada sameeya, tuugta aqoonsiga iyo dembiilayaasha kale waxay isku dayi karaan inay ka faa’iidaystaan kuwa